MBOLA RAJAONAH : « Mampikatso ny IEM ve ? » | déliremadagascar
politique	 6 août 2019 lynda
Rehefa afaka madiodio tamin’ny raharaha nisamborana azy i Mbola Rajaonah momban’ny taratasim-bola tsy misy antoka dia naverina eny Tsiafahy indray izy satria mbola misy raharaha hafa hiampangana azy. Amin’ny maha fikambanana mpiaro ny mpiara-belona iharan’ny tsindry hazo lena ny Fitoniana Tour sy Soluma dia manao antso avo ny tomponandraikitra isan-tsokajiny mba hijery akaiky ity raharaha ity fa toa lasa valifaty politika no miseho. Nambaran’i Berija Ravelomanantsoa fa fandikàn-dalàna amin’ny ladoany (infraction douanière) no hiampangana indray an’ity mpandraharaha ara-toekarena ity. Ny lalàna anefa milaza fa raha io fandoavana lamandy no takiana raha toa ka voamarina fa nanao io fandikàn-dalàna io, hoy ny filohan’ny Fitoniana Tour, Sambahita. Ny zava-misy dia tazomina eny amin’ny Tsiafahy i Mbola Rajaonah izay fonja hitazomana ireo olona manao eloka be vava, toy ny famonoana olona… no eny.
Nilaza ireto mpitarika fikambanana ireto fa mandalo ny fitondrana ka tokony hanova fomba fanao fa tsy hoe: rehefa tsy metimety amin’ny tena ilay mpandraharaha tamin’ny fitondrana teo aloha dia potehina. Mametra-panontaniana ihany koa izy ireo hoe: “Tsy mampandeha na mampikatso ny IEM ve i Mbola Rajaonah ka izay no hamotehana azy ? »
One comment on “MBOLA RAJAONAH : « Mampikatso ny IEM ve ? »”
Pingback: MBOLA RAJAONAH : « Mampikatso ny IEM ve ? » - ewa.mg